Dad gumaysigu ku xidhxidhay meelo kala duwan.
Shirar ka dhacay Birmingham iyo Manchester.
Wariyaha RX uga soo warrama dalka Ogaadeenya ayaa noo soo sheegay dagaallo badan oo waxyeellooyin ba’an loogu gaystay ciidammada gumaysiga Itoobiya. Dagaalladaas ayaa ka dhacay meelo kala duwan oo Ogaadeenya ka mid ah, waxayna u dhaceen sidatan;
10/11/07 dagaal ka dhacay Suryada Gumarta, oo Garigo’an u dhaw, waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 8 askari, 7 kalana waa lagaga dhaawacay.
09/11/07 dagaala ka dhacay Jirriile, oo Garigo’an u dhaw, waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 2 askari, waxaa sidoo kale lagaga dhaawacay 3 askari.
06, 07 iyo 08/11/07 waxaa weerarro mir ah lagu qaaday ciidammada gumaysiga ee fadhigoodu yahay magaalada Dhuxun, waxaana loo gaystay khasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
Isla 06/11/07 cutub ka tirsan CWXO ayaa weerar mir ku qaaday ciidammada gumaysiga ee fadhigoodu yahay magaalada Wardheer, waxayna u gaysteen khasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
05/11/07 waxaa weerar gaadmo ah loo gaystay ciidammo gumaysigu leeyahay oo ku sugnaa meesha lagu magacaabo Daalatooyiga, waxaana cidammada gumayisga la gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
Isla 05/11/07 Haarcad waxaa weerar mir ah loogu gaystay ciidammo gumaysigu leeyaha, waxaana la gaadhsiyay khasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
Sidoo kale 05/11/07 waxay CWXO baabuur kaga gubeen ciidammada guamysiga duleedka magaalada Dhagaxbuur, iyadoo ay baabuurkaas ciidammada gumaysiga kaga dhinteen in ka badan 50 askari.
04/11/07 Cutub ka tirsan CWXO ayaa hawlgal qorshaysan ka fuliyay magaalada Sasabane, waxaana hawlgalkan la qorsheyay, ka dib markii laga warhelay in saraakiil ciidammada gumaysiga ka tirsani ay ku sugan yihiin. Hawgalkan waxaa lagu dilay saraagl sare oo ka tirsan ciidammada gumaysiga, ninkii madaxda ka ahaa malleeshiyo Dabaqoodhi ah oo magaalada la dajiyay iyo nin isaguna gadh-wadeen u ahaa sargaalka Itoobiyaanka ah.
Markii hawlgalkan magaalada laga fuliyay waxay ciidammada gumaysigu gubeen guud ahaan magaalada Sasabane, marka laga reebo Masaajidkii, waxayna ku laayeen dad shacab ah.
31/10, 01 iyo 02/11/07 waxaa weerarro kala duwan lagu qaaday ciidammo gumaysigu leeyahay oo ku sugnaa meesha lagu magacaabo Gaashaanley, oo Dhagaxbuur ka tirsan, waxaana ciidammada gumaysiga loo gaystay khasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
28/10/07 waxaa weerar mir ah lagu qaaday ciidammo gumaysigu leeyahay oo ku sugnaa Cawl-ku-dhal, oo ka tirsan Dhagaxbuur, waxaana loo gaystay khasaare aan faahfaahintiisa la haynin. Aroornimadii ka denbaysay ayaa weerar kale lagu qaaday, hase yeeshee waxaa loo tagay ciidammadii gumayisga oo ka guuray. Waxaa goobtii loogu tegay malleeshiyo Dabaqoodhi ah, kuwaasoo laga qaaday hubkii ay wateen.
27/10/07 Magaala-cad waxaa lagu qaqabtay koox Dabaqoodhi ah oo tiradoodu ay 5 gaadhayso, ka dibna waa la iska sii daayay markii digniin la siiyay, hubkiina laga qaaday.
Isla 27/10/07 Dagaal adag oo CWXO iyo kuwa gumaysiga ku dhex maray Boodhley, oo u dhaxaysa Higlaley iyo Cobolle, waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 20 askari, 16 kalana waa lagaga dhaawacay.
Sidoo kale 27/10/07 weerar gaadmo ah oo lagu qaaday ciidammada gumayisga eek u sugan Yoocaale, waxaa lagaga dilay 5 askari, 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
Cidammada gumaysiga Itoobiya ayaa dad shacab ah ku laayay meelo kala duwan oo Ogaadeenya ka mid ah.
08/11/07 waxay ciidammada gumaysigu xerada Garabcase ee magaalada Jigjiga ku dhex dileen oo maydkooda dibada u soo tureen 2 qof oo shacab ah. Dadkan ayaa maydkooda la aqoonsan kari waayay, sababtuna waxay ahayd iyadoo maydkoodu uu muudhmuudhay.
06/11/07 Ciidammada guamysigu waxay xerada Garabcase ee magaalada Jigjiga ku dileen 8 qof oo maxaabiista halkaas ugu xaraysan ka mid ahaa, waxayna dadkan maydkooda ku soo tureen meel xerada duleedkeeda ah, iyadoo ay dadwaynihii ku adkaatay inay aqoonsadaan.
02/11/07 waxay ciidammada guamysiga Sasabane ku dleen nin shacab ah oo la odhan jiray Siraaj Cabdi Cali
01/11/07 Muluqo, oo Garigo’an u dhaw, waxay ciidammada gumaysigu ku dileen nin shacab ah oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Cumar.
31/10/07 Bilicil-buur, oo Dhagaxbuur ka tirsan, waxay ciidammada gumaysigu ku dileen dadka kala ah;
1- Asli Muxumed Dhicis iyo
2- Miyir Maxamed Axmed-nuur
Isla 31/10/07 Buuxisada, oo Fiiq ka tirsan, waxay ciidammada gumaysigu ku dileen Shugri Gees Ibraahim Dalab
30/10/07 waxaa xerada gumaysiga ee Garabcase ee magaalada Jigjiga duleedkeeda laga helay maydka labo qof oo ka mid ahaa maxaabiistii halkaas ku xidhxidhnay. Maydadkan ayaa ahaa kuwo muudhmuudhay oo aan la garan Karin.
23/10/07 waxay ciidammada gumaysigu labo qof oo shacab ah ku dileen meesha lagu magacaabo Laasa-caano. Labadan marxuum waxay kala yihiin;
1- Cabaase Cali Dalabey iyo
2- C/rashiid Maxamed Macalin
10/10/07 Waxaa Jeelka Booliska ee magaalada Jigjiga duleedkiisa laga helay maydka afar qof oo la filayo inay ka mid ayihiin dalkii jeelkaas ku xidhxidhnaa. Maydadkan ayaa ahaa kuwo qundhay oo aan waxba la garan Karin.
Ciidammada gumaysiga ayaa dadwayne rayad ah ku xidhxidhay meelo kala duwan oo gobollada Ogaadeenya ka mid ah.
05/11/07 Tuulada Waab, oo Qabridaharre ka tirsan, waxay ciidammada gumaysigu ka soo qaqabteen dad dhawr qof gaadhaya, kuwaasoo ay ku xidhxidheen magaalada Qabridaharre. Dadkani waxay kala yihiin;
1- Maxamed Haybe Muxumed
2- Ina Cabdi Xareed
3- Sh Mukhtaar Sulub iyo
4- Asad Cali Nuur, oo ay isaga labada gacmood ka jabiyeen.
Ciidammada gumaysigu waxay sidoo kale dab qabadsiiyeen Tuulada Waab, iyadoo uuna dabkaasi waxba ka reebin guryihii Tuulada ku yaallay.
02/11/07 waxay ciidammada gumaysigu magaalada Dhagaxbuur ku xidheen nin agu magacaabo Cabdi-Mahad Caydiid.
30/10/07 Bashuuro, oo Fiiq ka tirsan, waxay ciidammada guamysigu jidhdil ba’an ugu gaysteen C/waaxid Amiin Nuur
27/10/07 magaalada dhagaxbuur waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen dadka kala ah;
1- Khaliif Jaamac
2- Maxamed Jibriil
3- Xabiib Yuusuf iyo
4- In C/qaadir Fagadhe
26/10/07 Jeerinka, oo Fiiq ka tirsan, waxay ciidamada gumaysigu ku xidhidheen dadka kala ah;
1- Shugri Xasan Nuur
2- Maxamed C/llaahi Bashiir iyo
3- Bashiir Ibraahim Yuusuf
Sidoo kale 26/10/07 Haar-cad wxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen dadka kala ah;
1- Farxaan Faarax Muxumed iyo
2- Cabdi-dhoonbe C/nuur Gaydh
Maalimihii sabtida iyo axadda ee tariikhdu ahayd 10-11/11/07 waxaa magaalooyinka Bermigham iyo Mangaster ee dalka UK ka dhacay shirar si fiican loo soo agaasimay oo ay soo qabanqaabiyeen Jaaliyadaha Ogaadeenya ee magaalooyinkaas.
Shirarkan, oo ay ka soo qayb galeen dadwayne aad u fara badan, waxaa ka qayb galay guddoomiyaha JWXO Admiral Maxamed Cumar Cismaan iyo guddoomiyaha Hooggaanka Arrimaha Dibada ee JWXO Mudane C/raxmaan Sh Mahdi.
Shirarkan waxaa khudbado dhaadheer, oo xogwarran iyo wacyigalin isugu jira ka soo jeediyay labadan masuul, iyadoo ay dadwaynaha Ogaadeenya meel ay joogaanba ku dhiirrigaliyay inay si hagar la’aan ah uga qayb qaataan hawlaha halganka Ogaadeenya.
Isbahaysiga Dib U Xoreynta oo Soomaalida Magaalada Leicester u qabtay kulan balaaran..
.Bannaanbax ka dhici doono Oslo, Norway
.Bayaan kasoobaxay Jaaliyada Sweden
Wararka oo dhan ka akhri halkan.....
Kullan Nairobi ku dhaxmaray Musharax Yusuf Xassan iyo wariyaal Somali ah.. Akhri